UGoogle ufuna ukudibanisa iinkqubo zokutshaja ngokukhawuleza kwi-Android | Iindaba zeGajethi
UGoogle ufuna ukudibanisa iinkqubo zokutshaja ngokukhawuleza kwi-Android
Ukutshaja ngokukhawuleza kubangele iingxaki, ubuncinci kwizixhobo zeSamsung zeGlass 7 ezigqityiweyo ukuqhuma, ngaphandle kwento yokuba yonke into yalatha kwinto yokuba ingxaki ayilalanga kwizidibanisi, kodwa kwiibhetri ngokwazo. Kodwa ingxaki kuphela ayisiyiyo le, kwaye ikukuGoogle ibona indlela iinkampani ezizibonisa ngayo iinkqubo zokutshaja ngokukhawuleza kwizixhobo ze-Android ezingagqibi ukukholisa wonke umntu kwaye zahlukile komnye nomnye. Ngoku bafuna ukuyiphelisa le nto ngokwazisa Uxwebhu lwenkcazo yokuhambelana kwe-Android, ukuseta indlela eya phambili yokutshaja ngokukhawuleza.
Ibandakanya izindululo, ezinje ngokuba azibandakanyi itekhnoloji ezizodwa ezigqitha kumgangatho ombane kwizixhobo ze-Android, ukudala iingxaki zokusebenzisana phakathi kweeshaja zeemveliso ezahlukeneyo, ngaphandle kokuba sisixhobo esifanayo. Zizo iitekhnoloji ze Ukutshaja ngokukhawuleza kunye neQualcomm ezo zibonakala zidala iingxaki ngakumbi malunga noku, kwaye ulumke, kuba i-Android inokuthintela iinguqulelo ezizayo zenkqubo yokusebenza ekusebenziseni imithombo yeendaba ekhawulezayo yokutshaja eyaziwa kakhulu kwiintsuku zamva nje.
Eyona njongo kukuba zonke iishaja ze-USB-C zezixhobo ze-Android zisebenza ngokulinganayo phakathi kweempawu ezahlukeneyo, kuba mhlawumbi yinto leyo i-Apple ebisoloko igxeka, inyani yokusebenzisa iintambo zayo ezizodwa, xa kuvela ukuba izixhobo ze-Android ezi kusungulwa ubuchwephesha bokutshaja kutshanje obubonakala bungahambelani, obangela ingxaki enkulu kwinkqubo evaliweyo. Oku kuyanceda ukunqanda ububanzi bemikhono ehlawuliswa ziinkampani ngokuvulwa kwe-USB-C, into engakhange yenzeke nge-microUSB ngaphandle kwaxa kunqabile, kuba yayiyinkqubo esetyenziswa kakhulu kwaye ayivumeli ukugqithisa kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » UGoogle ufuna ukudibanisa iinkqubo zokutshaja ngokukhawuleza kwi-Android
IOS 10.2 iya kuzisa uloyiko lomsebenzi weqhosha
Ii-iPhone 6 kunye nee-6s Plus ziyavela kwiwebhusayithi ka-Apple ebuyiselweyo eMelika